Htet Htet Aung, Author at Chelmo News Portal
Author: Htet Htet Aung
Home›Author: Htet Htet Aung
Kpop မိန်းကလေးအဖွဲ့တွေထဲမှာ Blackpink , Twice နဲ့ (G)I-DLE တို့ က အရမ်းကို အောင်မြင်နေကြတဲ့အဖွဲ့ တွေဖြစ်ကြသလို အဖွဲ့ဝင်တွေ ကလည်း တကယ့်လက်တွေ့ဘဝမှာ တစ်ဉီးနဲ့တစ်ဉီးချစ်ခင်ကြတဲ့ သူတွေပါ ။ Blackpink Lisa, Twice’s Jihyo နဲ့ Mina , (G)I-DLE’s ...
tvN K-Drama မှာလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လကတည်းက ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ခြင်းကို ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ Twenty Five Twenty One ဇာတ်လမ်းတွဲဟာဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေအကြားအရမ်းကို ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ ဒရာမာဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုပါ၊ ဒီဇာတ်လမ်းထဲက အဓိကသရုပ်ဆောင်မင်းသမီးဖြစ်တဲ့Kim Tae Ri ဟာဆိုရင်ဇာတ်လမ်းထဲက နာဟီးဒို ရဲ့ပုံစံကို ကိုးကားပြီး ဇာတ်ကောင်ရဲ့ Accessories တချို့နဲ့ VIP Premiere ...
မကြာသေးခင်က IU ဟာ နိုင်ငံရပ်ခြားတစ်နေရာဖြစ်တဲ့ ပြင်သစ် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် မှာရှိတဲ့ Cannes မှာသူမရဲ့ပရိတ်သတ်တစ်ဉီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရတဲ့Video အတိုလေးကို Twitter မှာတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သူမရဲ့ Video ကို အာရုံစိုက်တဲ့သူတွေများပြာလာခဲ့ပါတယ် ၊ပရိတ်သတ် တစ်ဉီးက Cannes ရဲ့လမ်းတစ်လျောက်ကို ဖြတ်ကျော်လာစဉ် သူမကို လတ်မှတ်ထိုးခိုင်းပြီးတော့ မင်းဒီမှာပျော်နေတာလားလို့ မေးခဲ့ပါတယ် ၊ ...
Girl Generation ဟာဆိုရင် 5နှစ်မှာ တစ်ကြိမ် ပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံး Full Group Comeback ကို ပြီးခဲ့တဲ့ 2017 August ကတည်းက ပြုလုပ်မယ်လို့ ကြေငြာခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်သိပ်တော့ အံ့ဩစရာမဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့လည်း ပရိတ်သတ်တွေကတော့ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ စောင့်မျှော်ခဲ့ပါတယ် ,ပရိသတ်တွေစောင့်မျှော်ရကျိုးနပ်အောင် လည်း Girl Generation ...
Squid Game Season 1 ကတည်းက ကြည့်ရှူအားပေးခဲ့တဲ့ပရိတ်သတ်တွေအတွက် နောက်ထပ် လည်ပင်းရှည်စရာဖြစ်အောင် Season2ထွက်ရှိပြီဆိုတဲ့အကြောင်Netflix က June 12 Twitter post မှာ Season 1 က Animated Doll ရဲ့ မျက်လုံးမှာ2ဆိုတဲ့စာလုံးနဲ့ ...
ပြီးခဲ့တဲ့ June လ9ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် Song Ji Hyo ဟာ သူ့ရဲ့ Instagram မှာ အလှကုန် Photoshoot အတွက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဆံပင်ပုံစံအသစ်လေးနဲ့ ပုံကို တင်ခဲ့ပါတယ် ၊ လက်ရှိမှာတော့ Ji Hyo အွန်နီးဟာ နာမည်ကြီး ...
Fan Meeting မှာ Kim Woo Bin ကိုတောင်းပန်ခဲ့ကြတဲ့ Seventeen’s Joshua နဲ့ Seungkwan
Seventeen အဖွဲ့ဟာဆိုရင်တော့ မကြာသေးခင်က မှ သူ့တို့ရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ အတူ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ Zoom နဲ့ Fan Meeting ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ် ၊ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အမှတ်တရတွေထဲက တစ်ခုကတော့ Seungkwan နဲ့ Joshua က သူတို့ရဲ့ အစ်ကိုကြီး စီနီယာဖြစ်သူ Kim Woo Bin ...
Army တွေရဲ့ အချစ်တော် BTS Jungkook ဟာဆိုရင် Physical Workout လုပ်ဆောင်နည်းတွေကို မနေ့ကသူ့ရဲ့ Livesteam လွှင့်နေစဉ်အတွင်းပရိတ်သတ်တစ်ယောက်က မေးမြန်းတာကြောင့် ပြန်လည်မျှဝေခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ၊ သူဟာမနက်တိုင်း Workout Equipment တွေမလိုအပ်ဘဲဘယ်လိုမျိုး လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပြီးဝိတ်ချခဲ့လဲ? အိမ်မှာ Workout လုပ်ချင်သူတွေအတွက် နည်းနည်းတော့ခက်ခဲတဲ့နည်းလမ်း တွေ ပေမဲ့ ...
Louis Vuitton Event ကိုတတ်ရောက်အပြီး ညစာအတူစားခဲ့ကြတဲ့ GOT7’s BamBam နဲ့ Bright
ထိုင်းအနုပညာရှင် ၊ အဆိုတော် ၊ မော်ဒယ် စီစဉ်တင်ဆက်သူဖြစ်တဲ့ Bright ဟာဆိုရင်တော့ ပြီးခဲ့တဲ့ Louis Vuitton Fall Winter 2022 Men’s Spin-Off Show ကိုတတ်ရောက်အပြီးKpop ပရိတ်သတ်တွေ ရဲ့အချစ်တော် GOT7’s Bam Bam နဲ့အတူ ညစာစားခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ် ၊ ...
စတင်ထုတ်လွှင့်ပြသစဉ်ကတည်းက ပရိသတ်တွေအာရုံစိုက်မှုကို ရရှိခဲ့တဲ့ EVE Drama ဇာတ်လမ်းတွဲ
Nielsen Korea အရ June 1 ရက်နေ့မှာ Episode 1 ကိုထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ Eve ဒရာမာရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲ ဟာဆိုရင်တော့ပျမ်းမျှတစ်နိုင်ငံလုံးအဆင့်သတ်မှတ်မှု 3.644 ရာခိုင်နှုန်းကို ရရှိခဲ့ပြီး ၄◌င်းရဲ့ ရလာဒ်ဟာဆိုရင်တော့ မကြာသေးခင်ကမှ ထုတ်လွှင့်ပြသတဲ့The Killer’s Shopping List ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းရလာဒ်ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဆင်တူနေပါတယ် ၊Eve အမည်ရှိ Romance ...